Momba anay - Shijiazhuang damei kingmech pump Co., Ltd.
Damei Kingmech Pump Co., Ltd. dia mpanamboatra paompy sinoa matihanina amin'ny paompy indostrialy. Manaraka ny fitsipiky ny fanomezana ho an'ny mpanjifa fitaovana kalitao ilaina, ny orinasanay dia namolavola karazana fitaovana sy paompy manankarena, toy ny paompy slurry, paompy API 610, paompy simika, paompy maloto, paompy mpamily magnetika ary paompin-drano madio. Ireo vokatra rehetra ireo dia nampiharina betsaka tamin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, metallurgy, fitrandrahana arintany ary famokarana petrochemical, famokarana herinaratra, famatsian-drano ary ny fantsakan-drano sy ny fantsona sy ny fitsaboana sns ... Ny kalitao tsara sy ny fahombiazany azo antoka dia nanampy azy ireo hahazo fitokisana sy fankasitrahan'ny mpanjifa. Mandritra izany fotoana izany, misy valves paompy kalitao sy kojakoja mifandraika azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa.
Ny orinasan-tsika dia niorina tamin'ny 2007 ary namorona ambaratonga "3.13.30.300", izany hoe toby famokarana 3, traikefa manan-karena 13 taona, injeniera manam-pahaizana 30, mpanjifa mahatoky 300. Tohanan'ny ekipa teknisiana mahay be manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana paompy, ny prototyping ary ny fitsapana, nitombo haingana be i DAMEI tao anatin'izay taona lasa izay ary nanamboatra fitaovana fanodinana kalitao manankarena mifanaraka amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny tsena. Rehefa misarika ny fiheveran'ny mpanjifa manerantany ny vokatra dia manomboka manangana ekipa matihanina mpanolo-tsaina amin'ny varotra izahay. Izy ireo dia tsara amin'ny fanombanana sy famahana olana eo an-toerana, manampy anao amin'ny fanaraha-maso fitaovana, fampifanarahana paompy sy motera, fananganana rafitra paompy.
Ny foiben'ny orinasanay dia any Shijiazhuang tanàna, misy velarana 750m2. Ankehitriny, mpiasa matihanina maherin'ny 20 no miasa ao. Ireo zava-maniry telo naorinay dia miorina ao amin'ny Shijiazhuang (paompy slurry), Dalian (paompy simika), Shenyang (API 610 Petro-pump), izay samy mamokatra paompy mifanaraka amin'ny fenitra ISO9001, QA / QC, CE Mark , Marika IQNet sy fenitra indostrialy anatiny hafa. Ireo zavamaniry telo ireo dia misy atrikasa maoderina izay misy fitaovana mandroso amin'ny fanamboarana, fivoriambe, fitsapana ary fikojakojana. Ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba azy ireo dia lisitra etsy ambany:
1. Orinasa Shijiazhuang: gorodona ankapobeny: 8000m2, atrikasa: 2200m2, mpiasa: 30;
Orinasa 2.Dalianina: gorodona ankapobeny: 20000m2, atrikasa: 10000m2, mpiasa: 120;
Orinasa 3.Shenyang: atrikasa: 1600m2, mpiasa: 30.
4. Total: atrikasa: 13800m2, mpiasa: 180.
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia nifikitra tamin'ny fitsipiky ny fanomezana karazana paompy mandroso. Miorina amin'ny traikefa niainanay tamin'ny R&D sy ny fanamboarana paompy, dia namorona karazana paompy sy faritra vaovao maro izahay, toy ny paompy vita amin'ny akora hi-chrome sy paompy ary valves vita amin'ny Ti sy Ti, Ti ary Ti, Tiam-bozaka marindrano, BB2 goavambe paompy misy toerana fanosorana tena (miaraka amina tsiranoka Kingbury) ary koa bearings silikonin'ny karbonika ho an'ny paompy VS4. Satria ny ekipanay R&D dia nahavita namaky olana ara-teknika sarotra maro, dia afaka nanome ny paompy tsena izahay izay mahazo 1000kW hery ambony indrindra sy lohan'ny1000m ambony indrindra ary milamina tsara amin'ny hafanana 400 ° C. Paompy bebe kokoa amin'ny famaritana bebe kokoa novolavolaina amin'ny ho avy, mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa avo kokoa amin'ny fitaovana pumping.
Noho ny kalitaony tsara, karazana manankarena ary koa fahombiazana azo antoka, ny vokatra vokarinay dia naondrana tany amin'ny tsena ivelany, toa an'i Canada, US, UK, France, Australia, Czech, Poland, South-Africa, Argentina, Indonesia, Philippines , Kazakhstan, UAE, Pakistan sns ... Mandritra izany fotoana izany dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa amin'ireo orinasa iraisam-pirenena maro toa ny Anglo American plc izahay., Barrick Gold Corporation, BHP Billiton Ltd, Philex Mining Corporation, Pla. Kazzinc Group sy India fitrandrahana alimina aluminium sy ny orinasa Fatima Fertilizer Company voafetra sns.
Ny sivy taona lasa dia nanatri-maso ny ezaka lehibe nataontsika tamin'ny R&D sy ny fanamboarana paompy sy faritra. Na izany aza, raha tsy misy ny fitokisanao sy ny fanohanananao mahery, dia tsy hahazo izay azontsika na ho tonga ny toetrantsika mihitsy izahay. Noho izany, amin'ny ho avy ho avy dia tena hiezaka mafy izahay amin'ny fampandrosoana sy fanamboarana vokatra kalitao bebe kokoa ary hanome serivisy ho an'ny mpanjifa mifantoka kokoa aminao ary handroso hatrany amin'ny fahombiazana bebe kokoa.